‘सामुदायिक विद्यालय कमजोर भन्ने निजी विद्यालयले चलाएका हल्ला मात्रै हो’ — Bhaktapurpost.com
प्रभात मावि, नगल, काठमाडौं
विद्यार्थीले चाहेअनुसारको सिकाइ वातावरण तयार गरेका छौं । सिकाइलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई प्रोजेक्ट वर्क र कक्षाकोठा बाहिरको सिकाइमा जोड्दै आएका छौं । १ कक्षा देखि १० सम्मकै विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान र प्रोजेक्टवर्क खोज सिकाइमा सहभागी गराउँदै आएका छौं । पढेर मात्रै होइन गरेर सिक्ने वातावरण निर्माण गरिदिएका छौं । हरेक कक्षाकोठामा पर्याप्त सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गरिदिएका छौं । निकट भविष्यमै हरेक कक्षालाई मिनी प्रयोगशाला बनाउने हाम्रो योजना छ । शैक्षिक भ्रमण, सिकाइ भ्रमण गर्दै आएका छौं । निर्वाचन वारे जानकारी लिन निर्वाचन आयोग, इतिहासवारे बुझ्न संग्रहालय, जैविक सिकाइका लागि खेत र चिडियाखाना लग्ने गरेका छौं ।
कक्षाकोठालाई बालमैत्री र सिकाइ मैत्री बनाउन के प्रयास भएको छ ?
सिकाइ योजना लिएर मात्रै कक्षाकोठामा जान अनिवार्य गरिएको छ । साथै, हरेक दिन कम्तिमा एउटा शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षाकोठामा जान शिक्षकहरुलाई भनेका छौं । बसाइ व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्री सजावटमा मिहिनेत गरेका छौं । गएको ३ वर्ष देखि विदालयले नै जोयफूल मेथड विकास गरी कक्षा ३ सम्म लागु गरेका छौं । यसका लागि हामीलाई त्रिभुवन विश्वविदालयको सेरिड संस्थाले पनि सहयोग गरेको छ । कक्षा १ अगाडि हामीले केजी नर्सरी र पिजी गरी तीन तहनै सञ्चालन गरेका छौं । उनीहरुका लागि अलग्गै पाठ्यक्रम बनाएर मल्टिमिडियाको प्रयोगबाट सहभागीतामूल शिक्षण सिकाइ गर्दै आएका छौं । हामी पाठ्यपुस्तक भन्दा माथि उठेर शिक्षण क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छौं ।
हामीले जोयफूल मेथडमा सिकाएर ल्याएका बालबालिकाहरुको अवस्था अन्यभन्दा बेग्लै छ । अन्यको पनि सिकाइ राम्रो छ । अगाडि बढेर काम गर्न नेतृत्व लिन, मान्छेको अगाडि बोल्न हिच्किचाउन्नन् । अन्य कक्षाको सिकाइ सुधारका लागि हामीले नियमित कोचिङ कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसअघिका एसएलसीका नतिजाहरुमा प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा मात्रै गरी शत् प्रतिशत नतिजा थियो । अहिले एसइइमा पनि राम्रै छ । ३.६ माथिका जिपिए ल्याउने विदार्थीहरुपनि धेरै छन् । अन्य कक्षाहरुको सिकाइ उपलब्धिपनि राष्ट्रिय औषत भन्दा माथि नै छ । यसै स्कूल पढेर राष्ट्रका लागि योगदान दिने उच्च ओहादामा पुग्ने विद्याथीृको संख्या पनि राम्रो छ । रोजिता बुद्धाचार्य जसले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिन् ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको पटक्कै होइन । सामुदायिक विद्यालयको त झन् सवलीकरण पो भइरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु देखिइरहेका छन् । विभिन्न संस्थाहरुबाट पुरस्कृत पनि भइरहेका छन् । सरकारले पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरणमा चासो देखाउन शुरु गरेको छ । पहिले केन्द्रिय सरकार मात्रै थियो अहिले संघ, प्रदेश र थानीय तीनै तहका सरकार सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा जुटेको अवस्था छ । अहिले निजी विद्यलयहरुको टाउको दुख्न शुरु भएको छ । हाम्रो विद्यालयमा मात्रै होइन देशभर निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने क्रम बढिरहेको छ । यो सही समय हो । यदि अहिले स्थानीय सरकारहरुले विदालयको आवश्यकताका आधारमा केही सहयोग गरिदिने हो भने देशभरका सामुदायिक विदालयको स्तर निजीको भन्दा धेरै माथि पुग्नेछ ।
सामुदायिक विद्यालय कमजोर भन्ने निजी विद्यालयले चलाएको हल्ला मात्रै हो । अभिभावकहरु हल्लाकै पछाडि दौडिए । सामुदायिक विद्यालयको महत्व, पछि पाइने सुविधा बारे अभिभावकलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । अंग्रेजी भाषा जान्दैमा गुणस्तरीय हुँदैन । यो त भाषा मात्रै हो । शिक्षा र ज्ञान भनेको धेरै माथिल्लो कुरा हो । सरकारले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमात्रै होइन सामुदायिक विदालय पढेकालाई भविष्यका अन्य सेवासुविधासँग पनि जोड्नुपर्छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ। सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
यो पनि हल्ला हो । हजारौं लाखौंबाट प्रतिस्पर्धा गरेर छानिएका, कैयौं तालीम लिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । समस्या मात्रै व्यवस्थापनमा छ । न सरकारले शिक्षकको क्षमता पहिचान गर्यो न शिक्षक आफैले गरे । गरे शिक्षकले नै गर्ने हो सुधार । शिक्षकले चाहेमा गुणस्तरीय सुधार टाढा छैन । पढ्दापद्दै केही जागीर खाउँ न त भनेर पढाएका, कुनै तालीम नै नलिउका शिक्षकहरु छन् निजी विद्यालयमा । सामुदायिक विद्यालयका हरेक शिक्षक कम्तिमा १० महिने शिक्षण तालीम लिएका छन् । शिक्षा विषय पढेका छन् । दाज्न मिल्छ ? शिक्षकहरु सक्षम छैनन् भन्ने होइन तर, सबै शिक्षकले क्षमता अनुसार काम गरेनन् भन्ने मात्रै हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले केही सुधार गरे निजी विद्यालयहरु १० वर्ष पनि टिक्दैनन् । अब शिक्षकले सक्रियता देखाउनुपर्यो ।
एक पटक आयोग लडेर आएकाहरु सषम नै मान्नुपर्छ । बरु उनीहरुलाई वर्षैपच्छिे पुनताजंगी तालीमा चाँही दिनुपर्छ । वृत्तिविकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहनुपर्छ । शिक्षकलाई सक्रिय बनाइ राख्नुपर्छ । गरे शिक्षकले नै गर्ने हो ।
शिक्षक तालीममा पहिलेको भन्दा अहिलेकोमा धेरै सुधार आइसकेको छ । पाठ्यक्रम चाँही समय सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ । मूल्याङ्कनमा पनि समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ । अहिले स्वत्तः उत्तीर्ण हुने अवस्थाले विद्यार्थीहरु अल्छि भए । यस विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई काउन्सीलिङ गर्न अझै पुगेको छैन । यसैगरी अघि बढ्दा विद्यार्थीमा पढाइ प्रतिको रुची अझै घट्नेछ ।
सबै शिक्षकहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने, मन जित्न सक्ने, अभिभावकहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने, सहयोगी दाताहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने प्रधानाध्यापकहरुले नै विद्यालय सुधार गर्ने हो । नेतृत्व क्षमता, मिलनसार, दक्ष, रोलमोडल प्रअहरु नै सुधारका आधार हुन् । शिक्षक, विद्यार्थी र समयको आवश्यकता बुझेको प्रअ हुनुपर्छ । प्रअकै असल व्यवस्थापनले धेरै सामुदायिक विदालयहरुमा सुधार आएका देखिन्छ ।
प्रभात माविमा नै विद्यार्थीहरु किन पढाउने ?
विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरुको सर्वागिण विकासका लागि चाहिने सबै सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । यसका लागि सवै आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गरिसकेका छौं । केही गर्दै पनि छौं । यो नै विद्यालयको सबै भन्दा सवल पक्ष हो जस्तो लाग्छ । यहाँ विद्यार्थीहरुले हिजो नभइ आज र भोलि पढ्छन् । पुरा संसार नै बुझ्छन् । शिक्षकहरुले इन्टरनेटमा खोजेर सिकाउछन् । हाल अंग्रेजी माध्यममा शिषण सिकाइ गर्दै आएका छौं । कक्षाकोठाको अभावमा दुई सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं्र विहान र दिवा गरेर । हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घरभन्दा नि बढी रमाउछन् । बिदा भएपछि पनि नरमाइलो मानेर घर जान्छन् । र विद्यालय समय भन्दा धेरै अगाडि रमाउँदै विद्यार्थीहरु आउने गर्छन् ।
तपाई यस विद्यालयमा कहिले प्रअ बन्नुभयो ? तपाइ प्रअ बनेपछि के–के सुधार गर्नुभयो ?
मैले २०६६ साल पुस महिना देखि यस विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारी पाएको हँु । म प्रअ भएपछि कोसिस गरेर सफलता पाएको भनेको शिक्षकहरुसँगको समन्वय हो । मैले प्रअ बन्नसाथ पहिले विद्यार्थीको आवश्यकता बुझ्ने कोसिस गरेँ र सोही अनुसार सुधार गर्दै गए । अभिभावकहरु बोलाएर उनीहरुको पनि इच्छा बुझेँ । र सोही अनुसार सुधारको प्रयास थालेँ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरेँ । सिकाइ सुधारको योजना बनाए र सोही अनुसार व्यवहारमा सुधार गर्दै लगेँ ।
स्थानीय समुदायसँग विद्यालयको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । उनीहरुले नै शुरुमा स्थापना गरेर सञ्चालन गरेकाले उनीहरुको माया पनि विद्यालय प्रति धेरै पाएको छु । विद्यालय काठमाडौंको मुटुको पनि केन्द्रको ठाउँमा रहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा विद्यालयलाई स्थानीयले सेल्टरको रुपमा प्रयोग गरे ।
विद्यालयको समग्र अवस्थाको बारेमा बताइदिनुस न ?
विद्यालय प्रजातन्त्रको लगत्तै २००७ सालको श्रीपञ्चमीको दिनमा स्थापना भएको हो । शुरुमा प्रौढ शिक्षा पढाउन शुरु गरेर पछि मात्रै विद्यार्थीहरुलाई पढाउन शुरु गरेको हो । पछि निमावि हुँदै २०३० सालदेखि माध्यमिकतहसम्म अध्ययन गराउन शुरु गर्यो ।
शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्था के छ ?
विद्यार्थीहरु २५० जना छन् उनीहरुका लागि हामी निजी स्रोतमासमेत गरेर शिक्षकहरु ३० जना शिक्षकहरु छौं । विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुले चाहे जस्तै सबैखाले अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सहित बालमैत्री वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं ।
अबको विद्यालयको योजना के छ ?
विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरुको प्रतिभाप्रस्फुटनका लागि हर सम्भव कोसिस गरेका छौं । बाहिरी मैदानमा लगेर भएपनि खेलकुद गराउने गरेका छौं । विद्यार्थीहरुका लागि अनिवार्य कम्प्युटर कक्षा, प्रोजेक्टरबाट शिक्षक सिकाइ गर्दै आएका छौं । अब रहेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड जोड्ने, हरेक शिक्षकलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने योजनामा छौं ।